Soe Hein's Page - Myanmar Network
Soe Hein's Likes
Soe Hein's Friends
Soe Hein's Discussions
Shape The World Conference in Myanmar
Started this discussion. Last reply by Soe Hein Jul 25, 2011.7Replies4Likes
Hein Psychosocial SupportA message to all members of Hein Psychosocial Supportအလုပ်အကိုင်မရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ…Continue
တကယ်လို့ဘ၀ကို အသစ်ပြန်စရရင် သင်အမျှော်လင့်ဆုံးနဲ့ လက်မလွတ်ချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ ..........
Started this discussion. Last reply by upokun May 2, 2011.9Replies4Likes
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာနေတဲ့ ပိုလာဝက်ဝံရဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ကြားဖူးပါသလား….? အေးခဲတဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာ ဘုရင်တစ်ဆူလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် အက်စကီးမိုး လူမျိုးတွေက ဘာမှအင်အား ထုတ်စရာမလိုဘဲ…Continue
Started this discussion. Last reply by အောင်စောထွန်း Oct 3, 2010.2Replies0Likes
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူပေါင်း ၃၇၀ သန်း ရောဂါဖြစ်နေပြီး၊ နှစ်တိုင်း လူ ၁ သန်းသေဆုံးနေရတဲ့၊ အသဲရောင် ဘီပိုး အကြောင်း သိသင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက် ကာကွယ်ဆေးတော့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီပိုးကြောင့် ၃၀-၄၅ စက္ကန့်တိုင်း…Continue
Soe Hein has not received any gifts yet
Soe Hein's Page
At 12:23 on August 11, 2014,
At 9:39 on June 24, 2014,
At 17:50 on June 9, 2011, Khine Han Ni Myint@scarlet annie said…
Hi, ko soe hein nice to meet you!
At 14:31 on June 9, 2011, Win Thet Nwe said…
Hello Ko Soe Hein !
Thanks so much for your invitation to Myanmar Network. ! :)